အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် - ယခုတိုက်ရိုက်အဘိဥာဏ်နှင့်အတူ Chat ။ ကိုချစ်ပြီး PsychicBonus.com ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းအကြားအမြင်, tarot နှင့်နက္ခတ်ဗေဒင်စာဖတ်သူများနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုကိုရန်သင့်လမ်းကိုရှာပါ။ အခမဲ့အဘိဥာဏ်ကို chat session ကိုစတင်ပါ။ ဤနေရာတွင်အဘိဥာဏ်ဖတ်သင်အရှိဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းအတွက်အဖြေကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
ငါသုတေသနနှင့်လူမရရှိနိုင်ပါဆုံးပါရမီရှင်အကြားအမြင်ကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့အဘိဥာဏ်ဖတ်ကုမ္ပဏီများမှအကဲဖြတ်ရန်။ ငါဖြစ်စဉ်းစားပါအဘယျသို့အဘို့အပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပေး အင်တာနက်ပေါ်မှာထိပ်တန်း 10 အဘိဥာဏ်ဖတ်ကုမ္ပဏီများသည်။ ငါသာငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးပြုသောနဲ့ကျွန်မရှာနေခဲ့မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်တွေ့ပြီကုမ္ပဏီများအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ရိုးသားသောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့ကျယ်ပြန့်သုတေသန၏အားသာချက်ယူဖိတ်ခေါ်, သင်အကောင်းဆုံးသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီသောကုမ္ပဏီတှေ့လိမျ့မညျယုံကြည်မိပါတယ်။ ခံစားကြည့်ပါ! အကြားအမြင်ရ 2019 ကမ်းလှမ်း
Related Oranum ကူပွန်
Oranum မှာ 90 လအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ချွတ် 8% ကိုရယူလိုက်ပါ
Oranum မှာပထမဦးဆုံးချက်တင်အပေါ် 20% ချွတ် Get
Oranum မှာန်ဆောင်မှုများဟာ Off 59% ကိုယူ
အခမဲ့ 1 အောင်မင်းအကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းပြီးတော့ထိုအခါ 13% ဟာ Off အနားယူဏ ...
Oranum မှာ 30 မိနစ်အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းဟာ Off 15%
12 အခမဲ့မိနစ် & Up ကိုအကြားအမြင်ရအဆင်သင့်ဟာ Off% 35 မှ ...
Oranum မှာ RachelAnd ထံမှအကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းဟာ Off 70%
Oranum မှာသင့်ရဲ့အရစ်ကျဟာ Off 18%
နယူးအသုံးပြုသူများ Oranum မှာအခမဲ့ 8 မိနစ်စာဖတ်ခြင်း Get
Oranum မှာန်ဆောင်မှုများဟာ Off 30% ကိုယူ
Oranum အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကိုအဘိဥာဏ်ကွန်ယက်ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရာပိုလန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာခဲ့ကြပြီ။ သူတို့ကယခုဟန်ဂေရီထဲကအခြေခံထားတယ်။ သူတို့ကအစကအခြားအဘိဥာဏ်ကွန်ရက်များပူဇော်ကြဘူးအချို့ထူးခြားသော features တွေရှိသည်။ သူတို့ကချက်တင်ဖတ်, အီးမေးလ်ဖတ်နဲ့ web cam ဖတ်ပူဇော်လော့။ အဆိုပါကင်မရာဖတ်ရုံ Youtube ကိုဗွီဒီယိုကြည့်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, သင်သည်အဘိဥာဏ်နှငျ့ဆကျသှယျဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာသို့မဟုတ်မိုက်ခရိုဖုန်းမလိုအပ်ပါ။ အားလုံးဆက်သွယ်ရေးအတွက် webcam ဗီဒီယိုပူးတွဲသည် chat box တစ်ခုထဲသို့ရိုက်နှိပ်ထားပါသည်။ သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတိုက်ရိုက် reply ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦး webcam နှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းရှိပြုလျှင်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအဘိဥာဏ်တိုက်ရိုက်ကြောင်းလမ်းစကားပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
Oranum ကျဘျဆိုကျကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း >>
AskNow အကြားအမြင်ရရင်းမြစ်တစ်ခုကအလွန်နီးကပ်ဒုတိယဖြစ်ခဲ့သည်။ Asknow 1995 ကတည်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်, နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးလေးစားဖွယ်အဘိဥာဏ်ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်သိရသည်။ AskNow အွန်လိုင်းဖတ်ပူဇော်ဖို့ပထမဦးဆုံးအဘိဥာဏ်ကွန်ရက်ကြီးနှင့်တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးအဘိဥာဏ်စာဖတ်သူများအချို့ကိုလုပ်ကိုင်နေသည်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးဖုန်းနှင့်ချက်တင်ဖတ်ပူဇော်, သူတို့သည်အဖြစ်ကောင်းစွာစပိန်ဖတ်လုပ်နိုင်အကြားအမြင်ရှိသည်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမကအခြားအဘိဥာဏ်ကွန်ယက်ကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုခုပါပဲ။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းများခြုံငုံကျိုးကြောင်းဆီလျော် ရှိ. , ကသူတို့ရဲ့ website သို့အသုံးပြုရလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။
AskNow ကျဘျဆိုကျကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း >>
ဘဝ Reader ကိုသြစတြေးလျ, နယူးဇီလန်နှင့်ဗြိတိန်အတွက်လူသိများတဲ့အဘိဥာဏ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကသူတို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကြားအမြင်ရဖတ်ပူဇော်သက္ကာဘို့စတင်လေပြီတကား အကြားအမြင်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးသည်ကောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုတန်းတူအထက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အဲဒီအစားသူတို့ကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေအလွန်ခက်ခဲကြိုးစားနေမယ့်အစားတစ်ဦးအမြန်ခေါအောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကိုဖျောပွရာတိကျမှန်ကန်ရိုးသားဖတ်ပေးအကြားအမြင်ရစာဖတ်သူတွေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အကြားအမြင်၏အကြီးဆုံးရွေးချယ်ရေးရှိခြင်း၏။ ဒီသောကြောင့်သူတို့ 2008 စတင်ကတည်းကသူတို့တစ်တွေအလွန်သစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ရုံ $ 0.19 / မိနစ်သူတို့ရဲ့မိတ်ဆက်စျေးနှုန်းကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်မည်သည့်အကြားအမြင်ရကွန်ယက်ကိုအားဖြင့်ပွိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အံ့သြဖွယ်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ website ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်နှင့်ကျွန်တော်သူတို့တစ်တွေပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်သို့မဟုတ်သင်ကျေနပ်မှုမဟုတ်လျှင်သင်ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဖောက်သည်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုဖုန်းနံပါတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးစိတ်ပျက်ခဲ့ကြဖောက်သည်များအတွက်ကောင်းတဲ့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများထောက်ပံ့ပေးသော်လည်း။
LifeReader ကျဘျဆိုကျကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း >>
အကြားအမြင်ရရင်းမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြားအမြင်, ခြွင်းချက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလက်ဆောင်များနှင့်အတူအကြားအမြင်၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းအဘိဥာဏ်ကွန်ယက်ကို rated ခဲ့သည်။ အကြားအမြင်ရရင်းမြစ်ကအင်တာနက်မတိုင်မီနီးပါး 1989 နှစ်5ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ဖောက်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အကြားအမြင်ရရင်းမြစ်နေ့စဉ်မှာအကြားအမြင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သူတို့ကဖောက်သည်ကျေနပ်မှုနှင့်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူ။
PsychicSource ကျဘျဆိုကျကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း >>
စိတ်အားထက်သန်အွန်လိုင်းပထမဦးဆုံးအဘိဥာဏ်ကွန်ရက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဝေးသဖြင့်အကြီးဆုံးအဘိဥာဏ်ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကဘယ်နေရာမှာမဆိုအများဆုံးရရှိနိုင်အကြားအမြင်ရှိသည်။ သူတို့အကြားအမြင်၏အကြီးဆုံးသောငွေပမာဏကိုဆွဲဆောင်အကြံပေးဘို့နီးပါးမျှစိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်အားထက်သန်အကြားအမြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ရွေးချယ်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကကမ်းလှမ်းအဖြစ်, တယ်လီဖုန်းအဘိဥာဏ်ဖတ်ပြုပါသို့မဟုတ်ဖတ် chat လို့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ကယ့်ကိုနောက်ကျောတစ်ခုကို Keen အသုံးပြုမှု feature ခေါ်ဆိုမှုကြိုက်တယ်။ သင်နှင့်အတူစကားပြောဖို့လိုအဘိဥာဏ်မရရှိနိုင်ခဲ့လျှင် Keen.com အလိုအလျှောက်အဖြစ်မကြာမီသူတို့ရရှိနိုင်အဖြစ်ပြန်သငျသညျကိုပဌနာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအကြားအမြင်၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုတကယ် Keen.com ကိုကြီးမြတ်စေ, ဒါပေမယ့်အကြားအမြင်များအတွက်စိစစ်မှုသို့မဟုတ်လက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုမဆိုမျိုးမရှိခြင်းကိုအနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်ကျွန်တော်တို့ကိုရွက်။
ဟောလိဝုဒ်အကြားအမြင်ရုံပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က network ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမိမိတို့၏ကွန်ယက်ပေါ်တွင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျော်ကြားဆုံးအကြားအမြင်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသူတို့ကရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်ကြသည်ဟုပြောရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ network ပေါ်မှာရှိသမျှသောအဘိဥာဏ်ကျော်ကြားဘူး။ အကြားအမြင်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးသေးငယ်ပေမယ့်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးဖုန်းကိုပူဇော်နှင့်ဖတ် chat, သူတို့၏နှုန်းထားများအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်သည့်ပါရမီလူတွေစဉ်းစားကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခဲ့ကြသည်။
HollywoodPsychics ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း >>
အကြားအမြင်ရ Access ကိုသေးငယ်တဲ့အဘိဥာဏ်ကွန်ရက်, ဒါပေမဲ့သူတို့မဆို features တွေတက်မပေးပါဘူး။ အကြားအမြင်ရ Access ကိုအနည်းဆုံးပြောထူးခြားတဲ့အရာကို web cam ဖတ်, လှူသောကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်တစ်ခုတည်းသောအဘိဥာဏ်ကွန်ယက်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကွန်ယက်ကို DougC အမည်ရှိလူသိများတဲ့အဘိဥာဏ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ သူတို့သခင်ဘုရားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမီ DougC ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတိုင်းအဘိဥာဏ်ပေးပါသည်။ အကြားအမြင်ရရင်းမြစ်မှ Next ကိုသူတို့အထဲကအဲဒီမှာအကောင်းဆုံးစိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။
PsychicAccess ကျဘျဆိုကျကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း >>
Kasamba ချက်တင်အခြေစိုက်ဖတ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်ကဆိတ်ကွယ်ရာသတ်မှတ်။ မကြာသေးမီက select လုပ်ပါအကြားအမြင်ကွန်ယက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖုန်းကိုဖတ်ပေါ်အားလုံးမဟုတ်အကြားအမြင်သို့သော်တယ်လီဖုန်းဖတ်ပူဇော်ဖို့စတင်ပါပြီ။ Kasamba ချက်တင်အခြေစိုက်ဖတ်အထူးပြုအားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်ကဆိတ်ကွယ်ရာသတ်မှတ်, သူတို့ကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ Kasamba ယခင်ကတိုက်ရိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Kasamba ကလူသည်ပညတ်တရား, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပင်အကြားအမြင်အပါအဝင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှအကြံဉာဏ်ကိုရရန်အဘို့အရာအရပျအဖြစ် 1995 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ မကြာသေးခင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဟာ Kasamba အမှတ်တံဆိပ်သည်ယခုအခါတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအဘိဥာဏ်ကွန်ရက်ပယ်ရက်ကြ၏ Live! ကျနော်တို့ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်သင်၏အချတ်တစ်ခုကို log စောင့်ရှောက်လျှင်, ဒါကြောင့်သင်အမြဲပြန်သွားပြီးသူတို့သင်လိုချင်သောအချိန်မရွေးကပြောသည်အဘယ်အရာကိုဖတျရှုနိုငျသောကွောငျ့ချက်တင်အခြေစိုက်ဖတ်ကြီးမြတ်ခဲ့ကြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Kasamba ကျဘျဆိုကျကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း >>
သင့်ရဲ့အကြားအမြင်ရရိုးသားသို့မဟုတ်အတု Is အကယ်. ပြောပြပါရန်ကဘယ်လို
လူအတော်များများဟာအသက်တာ၌ခက်ခဲကြိမ်စဉ်အတွင်းအရေးကြီးသောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုသို့မဟုတ်အကြံဉာဏ်အကြားအမြင်မှလှည့်။ ဂရိတ်လမ်းညွှန်မှုစစ်မှန်သောအကြားအမြင်ထံမှဆည်းကပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တကစာဖတ်သူကိုတရားဝင်သို့မဟုတ်အတုဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်လုပျနိုငျကိုအကောင်းဆုံးအရာက con အနုပညာရှင်၏သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူမယ့်နိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ပညာပေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အဘိဥာဏ်အမှန်တကယ်အရင်းအမြစ်မှ၎င်းတို့၏သတင်းအချက်အလက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သတင်းအချက်အလက်အတန်ငယ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သွားကြောင်းမှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ဦးကအတုစာဖတ်သူကို့ winging ဖြစ်ပါတယ်, သူတို့အစစ်အမှန်သတင်းအချက်အလက်မှသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြရန်သင့်အားရဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်မရေမေးခွန်းတွေမေးပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးမရိုးသားသောအဘိဥာဏ်တူတစ်ခုခုပြောစေခြင်းငှါ, "ဘယ်သူ R ကိုနာမည်သောသူသည်?" အခွင့်အလမ်းတွေကိုလူအများစုစာ R. နှင့်အတူစတင်နာမည်တစ်ခုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိသားစု၌အထီးရှိသည်, ဖြစ်ကြသည်
တစ်ဦးကတရားဝင်အဘိဥာဏ် "ကျွန်မနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုလွန်သူကိုရောဘတ်၏အမည်အားဖြင့်ဤနေရာတွင်လူတရှိသည်။ " ဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုမှန်ကန်နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်နှင့်အချိန်အများစုကိုမည်, ပြောချင်, သင်အလွန်လျင်မြန်စွာသတင်းအချက်အလက်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ:
အတုအကြားအမြင်ရ: "အဘယ်သူသည်ငယ်ရွယ်လွန်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဝမ်းနည်းဖွယ်လမ်းအတွက်အသေခံသောသားယောက်ျားကိုခဲ့တာလဲ"
ရီးရဲလ်အကြားအမြင်ရ: "ကျွန်မနေတဲ့ကားတစ်စီးမတော်တဆမှုအတွက်လွန်သူတစ်ဦးနုပျိုအထီးရှိသည်။ "
အတုအကြားအမြင်ရ: "သင်ကနေ 100% ရတဲ့နေကဲ့သို့သင်တို့မခံစားရဘူးသောသူသည်သင်၏အသက်တာ၌တစ်ဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါသလော"
ရီးရဲလ်အကြားအမြင်ရ: "သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့နှင့်အတူရှိနေသောင့်လူတစ်ဦးငျလိုခငျြသို့မဟုတ်ထိုက်လမျး၌သင်၏မေတ္တာပြန်မပေးပါ။ အဘယ်အရာကိုဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ကိုင်ပြီးရဲ့ကတိကဝတ်သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့နှငျ့သငျလုံလောကျလုံလောက်သည့်အခါဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
တစ်ဦးချင်းစီကယ့်ကိုသတင်းစကားတစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မှုအဘို့မျှော်လင့်ကြသောအခါကြိမ်ရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အစစ်မှန်ဖြစ်ဆိုကြသည်သူကိုမရိုးသားသောအဘိဥာဏ်စာဖတ်သူတွေအတွက်လွယ်ကူသောပစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်အောင်အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်နိုငျသညျ။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးအကြားအမြင်နှင့်အတူစကားပြောနေသည့်အခါသို့သော်သူတို့မကြာခဏသူတို့ရဲ့ client များအနေဖြင့်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုရရှိသွားကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်မည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အိမ်ပြန်တာမျိုးနှင့်တစ်ဦးချင်းအသိသတင်းအချက်အလက်များသူတို့ကိုအဘို့ဖြစ်၏သိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါပဲ။
ဒါဟာသင်တစ်ဦးအဘိဥာဏ်အားဟောပြောတိုင်းတစ်ခုတည်းအချိန်ဖြစ်ပျက်မပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုတစ်ဦးစာဖတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များမှကြွလာသောအခါ, သင်၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ပင်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့သင်ယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျအလိုအလြောကျသတင်းအချက်အလက်များထံမှပြတ်တောက်ခံစားရလျှင်ကိုယ့်ကိုသင်မပိုင်ဆိုင်ပါဘူးဆိုရင်အဖြစ်, ထို့နောက်သင်သည်ပိုမိုနီးကပ်စွာအာရုံစိုက်နှင့်အခြားသတိပေးဆိုင်းဘုတ်များအဘို့အကြည့်ဖို့လိုပေမည်။
တစ်ဦးစာဖတ်သူများထိုပြည်၌သင်တို့သည်ပေါ်တွင်တင်ကျိန်ဆဲခဲ့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစာလုံးပေါင်းသငျသညျပတျဝနျးကငျြသောအနှုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပြလျှင်သူတို့ဖွယ်ရှိအတုပါပဲ။ ဤရွေ့ကား fraudsters ကပထမဦးစွာကျိန်စာသူတို့နောက်ကျခဲ့ပြီကှေဲနှင့်အခြားပြဿနာများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြခြင်းဖြင့်သူတို့၏ clients များတွှေပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသူတို့ကအချို့သောရှေးဟောင်းထုံးတမ်းဓလေ့ဖျော်ဖြေခြင်းအားဖြင့်ကျိန်စာကိုဖယ်ရှားပူဇော်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်အခကြေးငွေ။
ဒါကကျိန်စာဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်ပေးဆောင်သို့ clients များတွှေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တစ်အဘိဥာဏ်လိမ်လည်မှုတစ်ခုသေချာသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျိန်ဆဲသူတို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သူတို့ထိုက်မယုံကြောင်းခဲ့တာဘဝပြဿနာများကိုရှင်းပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပုံရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းနည်းစရာ, လူများစွာကကျလိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တကကျိန်စာကိုဖယ်ရှားတစ်ရာဒေါ်လာငွေအနည်းငယ်ပေးဆောင်ကဲ့သို့လွယ်ကူသောမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဤပြောထားသည်သူတစ်ဦး "အဘိဥာဏ်" ယုံကြည်ဘူး။
သင်တစ်ဦးအဘိဥာဏ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုနောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအရာ အွန်လိုင်းအကြားအမြင်ရ Chat ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်သက်သေခံခြင်းအွန်လိုင်းစစ်ဆေးနေသည်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အဘိဥာဏ်နဲ့အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ကြသူအတိတ်ဖောက်သည်ကအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်ထောက်ခံစာများဖတ်သင်အဘိဥာဏ်သည်အခြားဖောက်သည်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်နှင့်သူတို့တရားဝင်သို့မဟုတ်မဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟုယုံကြည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကအဘိဥာဏ်အစစ်အမှန်ဟုတ်မဟုတ်သို့မဟုတ်မတျစှာစီရငျမှကြွလာသောအခါဤအရာသည်အလွန် gauge နိုင်ပါတယ်။ ပင်ထိပ်တန်းအကြားအမြင်အမြဲသမဝါယမ clients များနှင့်အတူလက်ခံသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မကျမည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိမယ့်အနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောစာဖတ်သူတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှရဲ့, ဒါပေမယ့်မြောက်မြားစွာမကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူရှိသူများမှာအနီးကပ်ကြည့်ရှုရပါမည်။
ဤအသတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့သင်ယူခြင်းအားဖြင့်, သင်အွန်လိုင်းမှအဘိဥာဏ်လိမ်လည်မှုအပေါ်သင့် hard-ရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံဖြုန်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ ကြွင်းသောအရာစစ်မှန်သော, ပြုစုစောင့်ရှောက်အကြားအမြင်အမှန်တကယ်သူတို့ဝဠာကနေသင်တို့အဘို့အရယူနိုင်သည်ဆိုမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်လမ်းညွှန်မှုတလျှောက်တွင်အခြားဘက်ခြမ်းသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်ရှောက်သွားချင်တဲ့သူများတည်ရှိစိတ်ချပါ။
The Next အဆင့်ကဘာလဲ?
သင်တစ်ဦးတရားဝင်အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းရှာနေပါလျှင်ထိုကဲ့သို့သောသုံးခုအဘိဥာဏ်ကွန်ရက်များအဖြစ်သာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီများသည်ကိုအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော် (အထကျစာရင်းAsknow, အကြားအမြင်ရရင်းမြစ်, Kasamba နှင့်အခြားသူများ။ ) ။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကအားလုံးသုံးမှရွေးချယ်ဖို့အကြံပေးတစ်ဦးကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးရှိသည်, တစ်ဦးချင်းစီစာဖတ်သူကိုသူတို့တကယ်တော့အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စစ်မှန်သောနိုင်စွမ်းရှိသည်သေချာစေရန်တစ်ဦးတင်းကျပ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကတဆင့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဘိဥာဏ် Link ကိုချိန်း